Ireo no vaovao momba ny beta fahefatra an'ny iOS 15 sy iPadOS 15 | Vaovao IPhone
Ireo no vaovao momba ny beta fahefatra an'ny iOS 15 sy iPadOS 15
Angel Gonzalez | 28/07/2021 10:48 | iOS 15, About us
Ny vaovao dia mitranga ao amin'ny betas ho an'ny mpamorona ny rafitra fiasan'ny Apple vaovao. Ora vitsy lasa izay ny beta fahefatra an'ny iOS 15, iPadOS 15 ary ireo rafitra sisa. Na dia ny fanamarihana ofisialin'ny famoahana vaovao aza dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny rafitra sy ny fanitsiana ireo bibikely notaterin'ny mpamorona, Ao koa ny vaovao avy amin'ny beta teo aloha. Ao amin'io beta 4 fanovana bebe kokoa no ampidirina manodidina ny famolavolana radical an'ny Safari, ny widgets vaovao ary ny singa hafa dia ampidirina amin'ny fampiharana teratany toa ny fiavian'ireo sary mihetsika vaovao ao amin'ny app Weather. Lazainay anao ny vaovao etsy ambany.
Inona no vaovao amin'ny beta 4 ho an'ny mpamorona iOS 15 sy iPadOS 15
Ny zava-baovao mifandraika amin'ny famahana ny lesoka navoakan'ny mpamorona dia hita ao amin'ny Tranonkala ofisialin'i Apple. Ao amin'ny fanamarihana dia hitantsika ny lesoka novolavolain'ny API na ny rafitra voakasik'izany. Na izany aza, ireo mpampiasa izay tsy mahalala firy ny kaody na ny lesoka ao amin'ilay rafitra dia mifantoka kokoa amin'ny amin'ny zava-baovao misy patanty sy hita amin'ity beta fahefatra ity. Handinika ireo izay miseho amin'ny ora farany isika. Na dia mazava aza fa hihamaro hatrany ny vaovao hivoaka rehefa mandeha ny fotoana. Izy io dia kinova lehibe iray izay misy fiovana amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny rafitra.
Apple dia manohy manamboatra ny Safari ho an'ny iPadOS 15.
Ao amin'ny iPadOS 15 beta 4, miverina ny bara fisolo fisarahana ary io no toerana misy anao ankehitriny.
Raha tianao dia azonao atao ny * misafidy * mamela ny bara fisolo volo vaovao ao amin'ny Fikirana.
Antso tsara. 👍 pic.twitter.com/26GNfeJSyE
- Federico Viticci (@viticci) Jolay 27, 2021
Manomboka amin'ny iPadOS 15 izay nampiditra singa vaovao ao amin'ny Safari taorian'ny fanovana lehibe ny endrika sy ny foto-kevitra tamin'ny betas farany. Ao amin'ny beta 4 dia asiana bara fisarahana iray izay ahitan'ny mpampiasa ny URL lehibe indrindra eo ambony sy eo ambany, eo ambanin'ny URL, ireo takelaka. Toa bebe kokoa hatrany amin'ny Safari izay hitantsika ao amin'ny macOS Monterey. Na izany aza, Apple dia nanolotra ny mpampiasa ho an'ny mpampiasa ny mety azo atao miverena amin'ny layout Safari taloha mifamadika eo anelanelan'ny 'compact' na 'misaraka' amin'ny bara fitetezana sy kiheba.
Safari tamin'ny iPhone koa dia nisy fiovana sasany tamin'ny beta 4. Ny bokotra fizarana dia novaina tamin'ny toerana iray ary hita tao amin'ny bara fisoratana, ny bokotra fanavaozana dia tafiditra eo akaikin'ny URL satria misy izany ary ampiana sary mihetsika izay mampihena ny takelaka bara rehefa mijery ny tranokala. Ary farany, rehefa tsindry mandritra ny segondra vitsy ny bara URL dia hiseho ilay safidy hoe 'Asehoy ireo tsoratadidy'.
Apple dia namoaka ny beta fahefatra an'ny iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ary macOS Monterey
Ao amin'ny fampiharana amin'ny beta 4 an'ny iOS 15, ampidiro fiaviana vaovao mihetsika toy ilay hitantsika amin'ny sary izay mitarika ny lahatsoratra. Ny valin'ireto fiaviana mihetsika ireto dia madio tokoa raha jerena ny fanovana interface izay nandraisan'ny iOS 15 tamina fampiharana teratany toa ity.
Tafiditra ao koa ny mety hisian'ny zarao ny Mode of Concentration izay ahitantsika ny fifandraisana tsirairay. Etsy ankilany, ny endrika sasany izay tsy hita popoka amin'ilay interface vaovao ao amin'ny iOS 15 dia novaina, toy ny faritra 'Kaonty' ao amin'ny App Store. Ny valiny farany dia ny fihodinana latabatra izay mamela ny tsy fitoviana eo amin'ny menus system rehetra.
Hetsika vaovao antsoina hoe 'Return to home screen' no nampidirina tao amin'ny fampiharana Shortcuts. Azonao atao ny milalao amin'ireo hitsin-dàlana samy hafa efa noforonina na amin'ireo izay hoforonina manomboka izao. Farany, natolotra izy io habe vaovao ho an'ny Widget fampiharana Podcasts amin'ny iPadOS 15.
Widgets sy App Library amin'ny iPad dia tsara be. Ary ny fananana ny takelaka fanovana an-trano tsirairay dia miankina amin'ny Focus dia tena mora ampiasaina.
Tsy tiako ny pejy lalao mandritra ny asa, ary tsy tiako ny vaovao rehefa tsy mandeha. Hanandrana ny granularity eto. pic.twitter.com/jLM5tKahSG
- Wesley Hilliard (@HilliTech) Jona 13, 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ireo no vaovao momba ny beta fahefatra an'ny iOS 15 sy iPadOS 15